Cotton Canvas Tote neGusset Fekitori | China Cotton Canvas Tote neGusset Vagadziri, Vatengesi
Yakagadziriswa zvakare kanivhasi kanivhoni yekotoni tote bhegi inobata neZasi Gusset
Iyi zana muzana% yekotoni yakasarudzika totegi bhegi yakanaka tote kune yako eco-yekuziva kambani yekusimudzira yekupa. Yakareruka donje ndiyo yakanaka yekudhinda kanivhasi uye yekotoni mabheji akabata anoita kuti zvive nyore kutakura.
Inowanikwa mune makumi mashanu anonakidza echinhu mavara, Yako dhizaini skrini yakadhindwa
Makumbo marefu epfudzi; ODM / OEM yakagamuchirwa.
100% kugadzira, kukurumidza kuburitsa, mhando yepamusoro, mutengo unonzwisisika wefekitori;
Ruvara rwakachena Cotton Canvas Tote Bhegi Gusset gobvu Yakagadziriswa Shopping Tote
Iyi yekushambadzira tote ine yega-machira anobata kuitira kuti ugone kunyatso kutakura neruoko kana pamusoro pefudzi rako. Iri rinopetwa, risingaremi kanivhasi tote bhegi rine rakakura rakakura kamuri, 3 ″ D Pazasi Gusset, uye yakavhurika-yakavhurika muromo zvinoita kuti zvive nyore kutakura uye kuburitsa zvinhu zvako.
Yekusimudzira yekutenga masaga ekotoni Canvas Tote Bag NaGusset
Logo-Dhinda Organic Cotton Canvas Mucheka Blank Tote Bhegi Cotton Tote Mabhegi NaGusset
Inotonhorera 100% yakachena donje kanivhasi tote yekutenga bhegi ine gusset uye pasi
Grocery kutenga eco-inoshamwaridzika 100% donje kanivhasi tote bhegi ine gusset
tsika dhizaini Palin isina chinhu yakasviba dema kanivhasi yekotoni tote bhegi ine gusset
Custom logo hombe reusable yekutenga mabhegi ane tambo dhizaini yekutengesa
Yakasarudzika yepamusoro mhando yakadhindwa logo nhema Cotton Canvas Bags Ine Logo
Cotton Heavy Duty Gusseted Shopping Tote Nhema Canvas Tote Bag
Aya mabhegi achakubatsira iwe kusimudzira zororo rako kugara apo iwe uchipa vashanyi vako iyi yakasarudzika tote bhegi iyo inowanzo gara ichivayeuchidza nezve inoshamisa nguva inopedzwa newe. Yakasarudzika kudhinda sekukumbira kwako
Heavy Duty Reusable Cotton Grocery Shopping Canvas Tote Mabhegi neBazasi Gusset ye DIY
Yakakwira-yepamusoro tsika logo varume eco nhema kanivhasi tote mabhegi ane gusset
Inowanikwa nemitengo inodhura iwe unogona kutenga aya mabhegi akawandisa zvakare. MOQ kune 1piece, yemahara sampuro;